Muwaadiniin Ruush ah oo lagu eedeyay faragelintii doorashada Mareykanka – Banaadir weyne
17 Febraayo, 2018
Muwaadiniin Ruush ah oo lagu eedeyay farogelintii doorashada Mareykanka.
Madaxa baaritaanada farogelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadii ka dhacday Mareykanka, Robert Mueller ayaa saddex iyo toban qof oo u dhashay dalka Ruushka ku eedeyay inay ku lug lahaayeen farogelinta Ruushka uu ku sameeyay doorashadii ka Mareykanka.
Sidookale dhowr shirkadood oo laga leeyahay dalka Ruushka ayaa iyaguna lagu eedeyay inay qeyb ka ahayeen farogelinta Ruushka, waxaana shirkadahaasi kamid ah wakaaladda cilmibaarista internet-ka ee fadhigeedu yahay magaalada St Petersburg ee Ruushka.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa dhankiisa beeniyay inuu wax xiriir ah ka dhaxeeyay kooxdiisii ololaha doorashada iyo Ruushka, balse waxaa Trump soo dhaweeyay eedaha dambi ee uu Robert Mueller usoo jeediyay muwaadiniin Ruush ah.
Dacwad oogayaasha ayaa intaa ku daray in faragelinta oo bilaabatay bishii May ee sannadkii 2014 lagu doonayay in lagu waxyeeleeyo nidaamka siyaasadeed ee waddanka Mareykanka.
Mr Trump ayaa waxaa kale oo uu sheegay in faragelintaasi aysan wax saameyn ah ku yeelan doorashada. – BBC Somali News
Dowladda Kenya oo qiratay in 9-askari looga dilay dagaalkii ka dhacay Deegaanka Kulbiyow
Ra’isul wasaaraha Magaacaban Kheyre oo la kulmay Danjire David Concor
Baarlamaanka oo warqad u qoroya dowladda Ethiopia [Maxay tahay warqadda]
Madaxweynaha Galmudug Xaaf oo dib ugu laabtay magaalada Cadaado (Sawiro)